Israelista mpizaha tany no nikasa hitsidika an'i Tanzania taorian'ny nandravan'i Covid-19
Home » Travel Travel » Israelista mpizaha tany no nikasa hitsidika an'i Tanzania taorian'ny nandravan'i Covid-19
israeli agents landing in tanzania
Tanzania dia teo amin'ireo firenena afrikana nahasarika mpizahatany israeliana izay aleony mitsidika ireo valan-javaboary sy ny Nosy Ranomasimbe Indianina Zanzibar.
Mpizahatany Israel 140 eo ho eo no antenaina hitsidika an'i Tanzania amin'ny volana manaraka aorian'ny volana maromaro amin'ny fikatonan'ny trano sy ny fandraràna ny fivezivezena any Eropa sy ny tsena loharanom-pizahan-tany malaza manerantany
Andriamatoa Shlomo Carmel, mpanatanteraka sy mpanorina ny Another World Tour Company in Israel dia nilaza fa ny orinasan-dry zareo dia hikarakara sidina ho an'ireo mpizahatany israelita hitsidika an'i Tanzania.
Tanzania dia tsy tratran'ny valanaretina be loatra fa ny fiarovana sy fiarovana ny mpizahatany dia nalaina ary voahaja mifanaraka amin'ny World Health Organization (WHO) taorian'ny nahatongavan'ny governemanta tamin'ny Standard Operating Procedures (SOP).
Ny tatitra avy amin'ny faribohitra fizahan-tany any avaratr'i Tanzania dia nilaza fa vondrona israeliana miisa 140 ny mpizahatany no antenaina hihazo ny avaratry Tanzania amin'ny volana Mey (aogositra) taorian'ny nandaozan'ireo mpiasan'ny fizahan-tany sy mpaka sary fizahan-tany 15 avy amin'ny Tany Masina amin'ny Isiraely ny santionany amin'ireo fizahantany ao amin'io faritra io. herinandro
Mpizahatany 2,000 eo ho eo avy any Israel no tonga any Tanzania isan-taona.
Orinasa iray hafa manerantany no iray amin'ireo orinasa israeliana mivarotra an'i Afrika mandritra ny 15 taona mahery. Tanzania dia eo amin'ny toeran'ireo toerana afrikanina izay nanaovan'ny orinasa marketing mba hisarihana ireo mpizahatany avy amin'ny Christian Holy Land of Israel, Europe, America ary ireo tsenan'ny fizahan-tany hafa manerantany.
Ny orinasa dia manana traikefa an-taonany maro momba ny fizahantany afrikanina tamin'ny alàlan'ny traikefa Andriamatoa Shlomo 30 taona niasa tamin'ny maha-mpitari-dia fizahantany azy manerana ny kaontinanta. Manam-pahaizana manokana amin'ny fitsangatsanganana safari mihaja ho an'ny dia avo lenta amin'ity sehatra ity.
Izy io dia nandamina sy niasa fitsangatsanganana tsy manam-paharoa sy mahafinaritra ho an'ny toerana maro sy mahaliana manerantany.
Ny vondrona mpitsoa-ponenana 15 avy voalohany tany Israel dia nitsidika ny faritra Conservation Ngorongoro, Serengeti, Manyara ary ny Valan-javaboary Tarangire any avaratr'i Tanzania tamin'ny fitsangatsanganana familianazzy mba hanombanana ny zava-misy ankehitriny any Tanzania sy Afrika Atsinanana.
Faly ireo masoivoho tamin'ny zava-mahasarika sy ny kaonty napetraka hametrahana ny Covid-19 ary nilaza izy ireo fa vonona hisarika mpizahatany maro hitsidika ity faritra afrikanina ity.
Fanatsarana maro no vita tao Tanzania mba hiantohana ny fiarovana ireo mpizahatany amin'izao fotoana izao rehefa iharan'ny fandrahonan'i Covid-19 izao tontolo izao.
Ireo toerana manan-tantara israeliana dia ireo toerana Masina Kristiana ao amin'ny morontsirak'i Mediterane, ny Tanànan'i Jerosalema, Nazareta, Betlehema, ny Ranomasin'i Galilia ary ny rano manasitrana sy ny fotaka ao amin'ny Ranomasina Maty.
Ny mpivahiny Kristiana afrikanina dia mitsidika an'i Israel eo anelanelan'ny volana martsa sy aprily isan-taona mba hanomezana voninahitra an'ireo, Toerana Masina an'ny Isiraely sy Jordania.
Nanameloka 2,352 $ ny praiminisitra norveziana noho ny fandikana ny lalàna COVID-19 azy manokana
Maninona Timeshares no maty